China German ụdị hose mwekota emeputa na ụlọ ọrụ | Glorex
Germandị hose clamps nke German nwere 9mm na bandwid 12mm, eriri akwa dị n'etiti.
Mgbanaka na-adịghị emebi emebi nke ụdị hose clam nke German na-ejide n'aka na a naghị egwepịa ma ọ bụ bee silicone hose n'oge nrụnye yana ngwa kachasị nke iyi ọkụ, ka na-ejigide iguzosi ike n'ezi ihe nke njikọ ahụ ma na-enye akara kwụsiri ike, dabere na DIN3017.
Nkwakọ ngwaahịa ot a bụ akpa rọba, igbe igbe dị na igbe bụ katọn.E nwere akara dị na igbe.Special packaging (igbe ọcha, igbe kraft, igbe agba, igbe plastic, igbe ihe eji eme ihe, agbaze, wdg)
A na-ejikarị ụdị ụdị hopi clamps nke German na: ụgbọ ala, ụlọ ọrụ na ọrụ mmiri.
Germandị German hose mwepụ siri ike ma dịgide adịgide. Ogwe oghere dị n'akụkụ ahụ nwere mmetụta nchebe na sooks. Ihe convex na concave ahụ dị n'ime nwere nsonaazụ ndozi kachasị mma na sooks ， nke nwere ike igbochi akwara ahụ ịdapụ ma ọ bụ daa azụ.
PC / akpa
Nke gara aga: Double waya sooks mwekota
Osote: German ụdị sooks mwekota aka
Typedị German hose mwepu na-enweghị ịgbado ọkụ (yana s ...
German ụdị sooks mwekota aka
Germandị German hose mwekota na-enweghị ịgbado ọkụ